Madaxweyne Farmaajo oo ka bad baadiyey qorshe lagu dili lahaa & Kooxdii qaabilsanayd oo la qabtay
November 10, 2019 Farah Abdikadir Mohamed 0
MUQDISHO(P-TIMES)- Ciidamada Madaxtooyada Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay afar qof oo lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab, kuwaasi oo u qaabilsanaa madax jabinta amaba dilalka qorshaysan.
Saraakiil ka tirsan hay’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka ee NISA ayaa sheegay in ciidanka amniga madaxtooyada Muqdisho ay gacanta ku dhigeen afar dhalinyaro ah kuwaas oo lala kqabtay afar baastooladood oo ay ku hubaysnaayeen xili ay ku sugnaayeen Bar-Kontorool oo laga ilaaliyo madaxtooyada oo ku taala Isgoyska Ceel-gaabta ee demada Xamar Jajab, kadib markii ay ka shakiyeen dhalinyaradani ciidamadu.
Lama oga ujeedka dhalinyaradan hubaysnaa balse saraakiisha NISA ayaa aaminsan in ay qorshaynayeen dhalinyaradani dilka mid kamid ah masuuliyiinta ugu saraysa dalka.
“Afar dhalinyaro oo dhaadheer ayey ahaayeen waxayna ku hubaysnaayeen baskoolado mana jirin bartilmaameed rasmi ah looga shakin karo, balse meesha lagu qabtay ayaa ahayd goob aad loo ilaaliyo oo madaxda qaranka ugu sarayso ay ku nool yihiin” Sidaasi waxaa yidhi mid kamid ah masuuliyiinta hay’adada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka ee NISA.
Marka laga yimaado hadalka sarkaalkani madaxda NISA qaarkood ayaa aamisan in Al-shabaab ay bartilmaameedsanayso madaxweyne Farmaajo tana ay tahay qorshe ka dhan ah madaxweynaha si loo dilo.
Madaxtooyada Soomaaliya iyo deegaanada ku xeeran ayaa si weyn loo ilaaliyaa, waxaana marar badan weerar qorshaysan kusoo qaaday madaxtooyada ururka Al-Shabaab oo mar u jirsaday xogaa yar xafiiska uu madaxweynaha ku dhex leeyahay madaxtooyada Soomaaliya dalka halka weeraro kala duwan horteeda ka dhaceen.